Roobab sababay khasaare lixaadleh oo ka da’ay Degmada Bandarbeyla – SBC
Roobab sababay khasaare lixaadleh oo ka da’ay Degmada Bandarbeyla
Posted by Webmaster on October 21, 2012 Comments
Roobab ma hiigaan ah oo mudo ku siman 17saacadood ka da’ayay deegaano ka tirsan gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Bandar beyla ayaa dhaliyay khasaare baaxad leh.
Gudoomiyaga degmada Bandar beyla Maxamed Saciid Cali Anteeno ayaa isagoo u waramayay SBC sheegay in Roobabkaasi ay ku dumeen guryo tiradoodu gaareyso 15 guri islamarkaana ay go’een qasabadaha biyaha magaalada, uuna gudaha magaalada ka sameeyay ilaa iyo lix tog sida uu hdalka u dhigaye.
Waxa uu intaasi ku daray in magaalada aanjirin meel laga galo maadaama roobabkaasi ay sidoo kale jareen buundooyin ku hoos yaalay wadooyinka loo maro magaalada Bandar beyla oo ay dhistay Hay’ada Nesha.
Khasaaraha ugu badan ayaa dhaliyay daadad kor ka yimid oo gudaha u galay magaalada Bandar Bayla said uu gudoomiyuhu noo xaqiijiyay.
Lama soo sheegin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay roobabkan balse ay jiraan dad qaba dhaawacyo fudud.
Dowlada Puntland iyo hay’adaha Deeqaha bixiya iyo kuwa qaabilsan wadooyinka ayuu ugu baaqay gudoomiyaha Bandarbeyla gurmad deg deg ah oo lala soo gaaro si wax looga qabyo khasaarooyinkan ay roobabku sababeen ,.